रद्द एसइई र विद्यार्थीको मनोविज्ञान :: जगतप्रसाद रिजाल :: Setopati
रद्द एसइई र विद्यार्थीको मनोविज्ञान
प्रिय विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, यसपाली एसइई परीक्षा नहुने भयो! यो समाचार सुन्दा पक्कै पनि तपाईहरुको मनमा अनेकथरी तरङ्ग उब्जिएको हुनुपर्दछ। परिस्थितिबस सृजना भएको यो समाचार पूरै अनपेक्षित भने थिएन। समय घर्किदै जाँदा पनि परीक्षा लिन सम्भव नभएको पृष्ठभूमिमा सरकारसँग उपलब्ध विकल्प मध्ये यो नै उत्तम विकल्प थियो।
हाम्रो शैक्षिक संरचनाले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएको यो परीक्षा नहुने खबर सार्वजनिक भएसँगै यसको बारेमा थुप्रै प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्। कतिले यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिएका छन्। अब सरकारले सधैँको लागि एसइई परीक्षा खारेज गरेर कक्षा १२ मा मात्र राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने दलिल गरिरहेका छन् भने कतिपयले यसले कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले अर्को वर्षबाट पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आधारहरु पनि पेश गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ सरकार पनि दिर्घकालिन नीतिको लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा छ। जे होस् यो वर्ष एसइई परीक्षा नहुने भयो। एसइई परीक्षा भनेर दिनरात मेहनत गर्ने विद्यार्थीहरुलाई यो समाचारले कस्तो प्रभाव परेको होला? विद्यार्थीको उमेर र मनोवैज्ञानिक अवस्थाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकछिन त धेरैलाई रमाइलो अनुभूति पनि भयो होला।
जब परीक्षाका लागि भनेर उनीहरुले वर्षभरी गरेका त्याग, मिहिनेत, भोगेका तनाव र देखेका सपनाहरू सम्झिए त्यस पछाडि भने उनीहरुमा केही ग्लानी र पश्चतापको महशुस भएको हुनसक्छ। हाम्रो परिवेशमा कक्षा १० को पढाइ ज्ञान, सीप, क्षमता र व्यवहारीक विकास वा परिवर्तनको लागि भन्दा पनि एसइई परीक्षा र उच्च ग्रेड प्राप्तिको लागि सञ्चालन गर्ने परिपाटी स्थापित भैसकेको छ।
जसको लागि विद्यार्थीले त्याग र कष्ट भोगे त्यही परीक्षा नहुँदा उनीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न हुनुलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। अभिभावक र समाजले पनि एसइई परीक्षालाई फरक ढंगबाट हेर्ने गर्दछन्। परीक्षामा प्राप्त ग्रेडले अवोध बालबालिकाको सामाजिक हैसियत निर्धारण गर्ने चलन पनि छ।
यो परीक्षामा राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी समाजकै गहना बन्छ भने अन्य पक्षमा क्षमतावान् तर तुलनात्मक रुपमा कम ग्रेड प्राप्त गरेका बालबालिकाको सिमित कमजोरीको बारेमा सार्वजनिक बहस नै सुरु हुन्छ। कमसेकम यो वर्ष विद्यार्थीले यो पीडा भोग्न नपर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ। यो एउटा सकरात्मक पक्ष हो।
प्रिय विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, अब तपाईले फरक ढंगबाट सोच्नुहोस्। तीन घण्टाको जाँचले तपाईको बहुआयामिक क्षमताको वास्तविक परीक्षण गर्न कसरी सक्थ्यो र? जे भो राम्रै भो, अब सकरात्मक सोचाइका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। तपाईहरुको मिहिनेत खेर गएको छैन। यसले झन् नयाँ उचाइ र आयाम समात्ने निश्चित छ।
शिक्षाको मुख्य उदेश्य प्रतिभाको परीक्षण गर्ने नभएर उनीहरुमा नयाँ ज्ञान विकास र अन्तरनीहित क्षमताको प्रस्फुटन र प्रशारण गर्नु हो। यसरी हेर्दा तपाईहरुलाई यो परीक्षा नहुदाँ कुनै गुणात्मक असर पर्ने छैन। आफूले आफैलाई दुनियाँको सामु प्रमाणित गरेर देखाउने अन्य धेरै अवसरहरु छन्। त्यसकारण अब कोरेना ब्याचको ट्याग लाग्छ कि भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि तपाईहरु हनुहुन्न।
रट्नु पर्ने किताबका ठेली हुन् वा भर्नु पर्ने कपिका पनाहरु, एउटा विद्यार्थीले वार्षिक रुपमा पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व पनि पूरा भैसकेका छन्। आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार तहगत रुपमा सिक्नुपर्ने कुराहरु पनि सिकिसक्नु भएको छ। लामो र बहुप्रतिक्षित दौडको फरक ढंगको अन्त्य पछि केही समय विश्राम लिने बेला र अवसर आएको छ।
अब आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। आगामी यात्राको लागि तयारी गर्नुहोस्। यसको लागि आन्तरिक व्यवस्थापनको तालिका बनाउनुहोस्। बन्दाबन्दीको समय भएकोले घरभित्रै बसेर आफूलाई रुचि भएका विषयहरु खोज्ने, हेर्ने र पढ्ने काम गर्नुहोस्। परिवारका सदस्यसँग दिल खोलेर कुरा गर्नुहोस्, सकेको काममा सघाउनुहोस्।
जिवनको महत्त्वपूर्ण पाटो सिकाई हो। यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्, अब झन् दिल खोलेर सिक्नुहोस्। किनकि सबै सिकाइमा मन लागे पनि, नलागे पनि परीक्षा दिएर त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्ने गलत मान्यताबाट तपाई एक कदम अगाडि बढिसक्नु भएको छ।
परीक्षा नभएर तपाईहरुले केही गुमाउनु परेको छैन। बरु लामो समयको मानसिक तनाबबाट मुक्त हुने अवसर मिलेको छ। वर्षभरी तपाईहरूले गरेको प्रदर्शन, आन्तरिक परीक्षा र एसेसमेन्टमा तपाईले देखाएको योग्यता र क्षमता लगायतका बहुआयमिक पक्षको मूल्यांकनका आधारमा तपाईरुको उपलब्धि मापन गरिनेछ।
तपाईको खुबीलाई नजिकबाट नियालि रहेका गुरुहरुबाट तपाईको मुल्यांकन हुने हुँदा यो वास्तवमै विश्वासनीय र वैध हुनेछ। जसले गर्दा आगामी शैक्षिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला वा रुचि भएको विषय अध्ययन गर्न पाइएला कि नपाइएला जस्ता समस्याहरुको बारेमा पनि यहाँहरुले चिन्ता गर्नु नपर्ने देखिन्छ।
यसरी हेर्दा नेपालको यसएलसी/एसइई परीक्षाको इतिहासमा वास्तविक मूल्यांकन हुने भाग्यमानी ब्याचमा तपाईहरु नै पर्नु हुनेछ। यहाँहरुको आगामी शैक्षिक यात्रा पनि सुखद् र अविस्मरणीय बनोस्, सुभकामना।
(लेखक प्रधानाध्यापक हुन्।)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७, १३:३८:००